Global Voices teny Malagasy · 8 Marsa 2019
08 Marsa 2019
Tantara tamin'ny 08 Marsa 2019
Simba ny demaokrasia ao Albania, miala ao amin'ny parlemanta ny mpanohitra ka manao famoriam-bahoaka goavana
Eoropa Afovoany & Atsinanana 08 Marsa 2019
Albaney an'arivony no nandray anjara tamin'ny famoriam-bahoaka notarihan'ny mpanohitra tamin'ny 21 Febroary tao an-drenivohitra Tirana. Mitaky fifidianana vaovao izy ireo taorian'ny fanadihadiana nataon'ny Voice of America sy ny Balkan Investigative Reporting Network nilaza fa niara-niasa tamin'ny andian-jiolahy tamin'ny tetikady fividianam-bato ireo manampahefam-panjakana tamin'ny fifidianana 2017.
Nanampy trotraka ny hetsika manohitra ny tribonaly miaramila ny fampiantsoana ilay Bilaogera Ejiptiana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 08 Marsa 2019
Ry sakaiza sy kamarady ny fomba hanampiana ahy tsara indrindra dia ny mitabataba momba ny tsy rariny mihatra amin'ny sivily miatrika tribonaly miaramila eto Ejipta.
Shina: Spam politika ao amin'ny Twitter
Shina 08 Marsa 2019
Fomba iray mahomby amin'ny fizaràna vaovao ivelan'ny tambajotra sosialin'ny mpiserasera ny rafitra "tag" (fanamarihana) ao amin'ny Twitter. Na izany aza, mora hiharan'ny hafatra spam ny rafitra. Any amin'ny firenena tandrefana, tarihin'ny tombontsoa ara-barotra ny ankamaroan'ireo mpanao spam, raha fitaovana ara-politika hanakorontanana ny fivezivezem-baovao kosa izany any Shina.
Malezia: Fitazonana tsy misy fitsarana ho an'ilay bilaogera RPK
Malezia 08 Marsa 2019
Lalàna natao hiantohana ny filaminana anatiny ao Malezia, ny fampidirana am-ponja vonjimaika, ny fisorohana ny fanakorontanana, ny fanafoanana ny herisetra voalamina atao amin'ny olona sy ny fananana any amin'ny faritra voatondro ao Malezia, ary amin'ny zava-mitranga mifandraika amin'izany.
Iran:”Bilaogera iray hafa voasambotra”
Iràna 08 Marsa 2019
Nitatitra [fa] ny Hrna, sampam-baovao mpikatroka ny zon'olombelona fa nosamborina andro vitsy lasa izay i Ali Pour Soleiman, bilaogera sady mpampianatra ao Iran. Mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny mpampianatra izy ary nanoratra tao amin'ny bilaogy Sokhane Molem (midika hoe tenin'ny mpampianatra).